Masuuliyiinta Dawlada Ayaa ka Warbixiyey werarkii Lagu soo Qaaday Xarunta CID-da – STAR FM SOMALIA
Masuuliyiinta Dawlada Ayaa ka Warbixiyey werarkii Lagu soo Qaaday Xarunta CID-da
Dagaalyahano katirsanaa Xarakada Al-Shabaab oo labo kamid ah wateen gawaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa saakay weerar ku qaaday xarunta Dambi baarista booliiska CID ee magaalada Muqdisho.
Wasaarada Amniga Xukuumada Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in ragii weerarka kusoo qaaday xarunta Dambi baarista ay ahaayeen 7-nin oo labo kamid ah ay is qarxiyeen halka shanta kalana ay ciidamada booliiska toogteen.
Wasiirka Amniga Gudaha Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed, oo Warbaahinta kula hadlay xarunta la weeraray ayaa sheegay in ciidamada amaanka ay hayeen xogta weerarkan ayna ka horgaeeen .
Waxa uu tilmaamay Wasiirka in ragii weerarka kusoo qaaday xarunta CID ay ahaayeen todobo nin oo shan kamid ah ciidamada toogteen iyaga oon wax dhibaato ah geesan halka labo kalana ay banaanka isku qarxiyeen.
Wasiirka ayaa sheegay in Weerarkan ay ku dhinteen 13-qof oo shan kamid ah yihiin dad shacab ah , waxa uuna intaa raaciyay in booliiska weerarkasi kaga dhintay hal askari halka shan kalana kaga dhaawacmeen, waxa uuna sheegay in todobada kale ee dhimatay ay Al-Shabaab ahaayeen.
Al-Shabaab ayaa sheegatay masuuliyada weerarkan maanta lagu qaaday xarunta Dambi baarista ciidanka booliiska Soomaaliya, waxa ayna Shabaab sheegeen in weerarkaasi ay ku dileen coiidamo katirsan booliiska Soomalaiya iyo sarakaiil.
Guddoomiye Waaxeed ka tirsan Maamulka Degmada Yaaqshiid, ayaa rag hubaysan Toog teen
DHAGEYSO:-Warka Duhur Starfm 31-07-2016